Kenya oo Ethiopia ku Furtay ALabaab Cusub oo Nabadiid – Rasaasa News
Apr 3, 2011 Dawlad gabaleedyada aan xisaabta lahayn ee ka dhalanaya dalka burbursan ee Somaliya, Kenya oo Ethiopia ku Furtay ALabaab Cusub oo Nabadiid, qaarkood waxay khatar galin doonaan deganaanshaha dalka Ethiopia, waxayna u xuub siiban doonaan mucaarad Ethiopia.
Dawlad gabaleedyada aan xisaabta lahayn ee ka dhalanaya dalka burbursan ee Somaliya, qaarkood waxay khatar galin doonaan deganaanshaha dalka Ethiopia, waxayna u xuub siiban doonaan mucaarad Ethiopia.
Dawlad gabaleedka u khatarta badan waxaa laga yaabaa in ay ka dhalato gabalada koonfureed ee dalka Somaliya, dawladaas oo taageero ka heli doonta dalka Kenya.
Dalka Kenya oo hore uga gaabsan jirtay qalalaasaha ka jira dalka Somaliya, ayaad moodaa in maanta ay usha u jabsatay sidii ay dalka Somaliya ee burbursan ugula looltami lahayd dalalka geeska Afrika.
Dawlada Kenya waxay ka mid ahayd dalalkii balan qaaday in dawlada federalka ah ee Somaliya ay ciidamada u tababaraan. Ciidankii ay Kenya u tababartay Somaliya waxay gacanta u galisay Maxamed Cabd Gaandi, oo mar ahaan jiray wasiirka gaashaandhiga ee Somaliya, laakiin khilaaf dartii ka tagay dawlada Somaliya.
Ciidankaas waxaa uu diyaar ku yahay gudaha dalka Kenya, wuxuuna diyaar u yahay in uu dagaal la galo, ciidanka Bare Hiiraale iyo ciidanka Sheekh Axmed Madoobe inta uusan gaadhin ciidanka awooda badan ee Al shabaab oo haysta gabalada koonfureed ee Somaliya.
Gaandhi, oo ah madaxweynaha dawlad gabaleedka cusub ee koonfurta Somaliya ahna nin aad ugu xidhan dalka Kenya, waxaa uu xidhiidh dhaw la leeyahay ama uu ka tirsan yahay ururka burburay ee ONLF. Gaandi waxaa uu hamigiisa ugu wayn yahay in uu saldhig u helo ururka ONLF oo Itobiya lagu jabiyey.
Dawlada Kenya way la socotaa Gaandhi waxa uu wado, wayna ogtahay taageerayaashiisu kuwa ay yihiin. Kenya waxaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyey laga qabtay 120 xubnood oo ka tirsan ururka OLF[oromo liberation frornt], taas waxaa lid ku ah in dalka Kenya shirar loogu qabto qaybta nabad diiday ee ururka ONLF.
Siyaasiyiinta Somalida Kenya, waxay dawlada Kenya mudo ka dhaadhicinayeen, in dawladu taageero siiso dawlad gabaleed saaxiib dhaw la noqota Kenya, oo ka horjoogsata xasarada Somaliya iyo Alshabaab.
Kenya way aqbashay wayna bilowday taageerada saxaafada, waxaana barnaamijyo lagu taageerayo maamulkaas lag sii daayaa Telefishinka KBC ee Kenya. Ciidamadii loo tabobaray dawlada Somaliyana, waxay Kenya ku wareejisay Maxamed Cabdi Gaandi.
Dawlada federalka ah ee Somaliya way diiday in ay aqoonsato maamulka cusub ee uu madaxda ka yahay Maxamed Cabdi Gandi, waxaa kale oo iyana diiday dadka degan degaanada koonfurta Somaliya.
Maxamed Cabdi Gaandhi waxaa uu rajo ka qaba in uu gabalada Jubooyinka koonfurta Somaliya ku qabsado awood ka timaada dalka Kenya, ka dibna uu noqdo maamulkiisu meesha laga soo abaabulo kooxo lid ku ah dalka Itobiya.
Ethiopia waa dal ku tiirsan deeqda ay bixiyaan dalalka reer galbeedku, aadna ahmiyad ugu leh dalalka galbeedka, kolka laga eego dhinaca la dagaalanka argagixisada, inta badana iyada ayaa wax laga waydiiyaa arimaha dalka Somaliya.
Damaaciga siyaasadeed ee dalka Kenya iyo dabka uu ku hoos jira maamul gabaleedka uu madaxda ka yahay Maxamed Cabdi Gaandi, waxay masalaha u dhigi kartaa isku dhac dhex mara labada dal ee Kenya iyo Itobiya.
Kenya iyo Itobiya labadooduba waxay cuqdad ka qabaan dawlad awood leh oo ka dhalata dalka Somaliya, hadii taas la waayana, waxay labada dal isgu dhici kala jiidashada maamul gabaleedyada Somaliya ee aan micnaha lahayn ee xasarada kaliya u jira.
Dadka indha indheeya siyaasadaha geeska Afrika, waxay cabsi ka qabaan in Kenya dhexdeeda ay ka abuuranto Jabhad Somali ah oo xornimo u doonaysa gabalka NFD ee Kenya, hadii ay dawlada Kenya lugaha la gasho xasarada dalka Somaliya.